I-Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey | Ikhishi Recipes
I-Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey
UMaria vazquez | 11/12/2021 10:00 | Okufakiwe Okushisayo
Ama-mücver ama-fritters endabuko ukudla kwaseTurkey. Ngokuvamile zilungiswa nge-zucchini eqoshiwe njengesithako esiyinhloko futhi iyindlela ehlukile yokwethula le mifino ngendlela ekhangayo etafuleni. Kubonakala sengathi isiqalo esihle sikaKhisimusi kimi, akunjalo?
Lokhu kudla okuthosiwe kuvame ukuba no-anyanisi, u-garlic, ufulawa, i-hollow kanye ne-dill futhi lokho, okunezinguquko ezincane, lezo engizisebenzise ekuphekeni. Acwebile ngaphandle futhi ithenda ngaphakathi. Ukuthola lokho kuthinta okuqinile kuyisihluthulelo salezi zinhlayiya futhi kukhona amathiphu amabili alokhu: khipha i-zucchini kahle bese uyithosa emafutheni amancane nasekushiseni okuphakathi.
Ungakwazi ukwethula etafuleni njengoba kunjalo noma kuhambisane nesoso. Ngicabanga ukuthi etafuleni likaKhisimusi ukwethula isoso elilodwa noma amabili nalawa kunganikeza ukugqama okwengeziwe kulo mqali. Into yesintu wukubakhonza nge i-yogurt sauce kodwa ngiyawuthanda umqondo wokubaphelezela ne I-Romesco sauce. Ingabe uzolokotha ukuzenza?
I-Zucchini Mücver: Amafritter amasiko aseTurkey
½ isipuni sikakhumini
D isipuni sedill
Amaqanda ama-1 L
2 wezipuni ufulawa kakolweni
I-Virgin olive oil yokuthosa
Sinquma imikhawulo ku-zucchini bese siyigaya ku-grater eqinile. Sifaka ku-colander, engeza usawoti, uhlanganise futhi uvumele ukuphumula imizuzu engu-30-40 ukukhulula uketshezi.
Ngemva kwalokho, siyayikhama ngezandla zethu bese siyigoqa ngendwangu ehlanzekile bese sisonta ukuze siqedele ukukhipha uketshezi olusele.
Gcoba u-anyanisi negalikhi kahle bese uxuba ne-zucchini endishini enkulu.
Kwesinye esincane sihlanganisa iqanda elishaywayo ngezinongo kanye nofulawa.
Sithululela le ngxube phezu kwe-zucchini bese sixuba. Kufanele sizuze ingxube ehlala ihlangene futhi engachitheki lapho siyifaka emafutheni.
Uma inhlama yenziwe, sibeka amafutha epanini, ngokwanele ukuze isisekelo saso sonke sihlanganiswe kahle, futhi sishise ngokushisa okuphakathi.
Sithatha isipuni senhlama bese siyibeka emafutheni, siyifake kancane ngesipuni esifanayo ukuze sinikeze isimo se-pancake. Siyiyeke ibe nsundu bese siyiphendula.
Senza wonke ama-fritters ngendlela efanayo, ngamaqoqo amathathu noma amane.
Njengoba ziba nsundu, siyazikhipha futhi sizibeke, ngaphandle kokuzinqwabelanisa, endaweni yokubeka enephepha lasekhishini ukuze simunce amafutha amaningi.
Sinikeza ama-mücver e-zucchini asanda kwenziwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » I-Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey